ညိမ်းညို: October 2007
"တစ်နှစ်" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
စာမေးပွဲကျတဲ့ ကျောင်းသားကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်လ" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
လမစေ့ပဲ ကလေးမွေးတဲ့မိခင်ကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်ပတ်" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
"တစ်နေ့" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
ကလေး ၆ ယောက်ကို ကျွေးနေရတဲ့ နေ့စားအလုပ်သမားကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်နာရီ" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
ဆုံဆည်းခွင့်ကို စောင့်နေကြတဲ့ ချစ်သူများကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်မိနစ်" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
ရထားမမီလိုက်တဲ့ ခရီးသည်ကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်စက္ကန့်" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
ယဉ်တိုက်မှုနဲ့ သီသီလေးလွဲသွားတဲ့ ဒရိုင်ဘာကို မေးကြည့်ပါ။
"တစ်မီလီစက္ကန့်" ရဲ့တန်ဖိုးကို သိချင်ရင်
အိုလံပစ် ငွေတံဆိပ်ရှင်ကို မေးကြည့်ပါ။
- တောထဲမှာ အောက်ဒိုးထွက်ရင်း စာရွက်အပိုင်းအစတစ်ခုကနေ ကူးထားမိတာပါ။ ထုတ်နုတ်စာအုပ် ဖော်ပြမပေးနိုင်တာ တောင်းပန်အပ်ပါတယ်။ သိလျှင် ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by ညိမ်းညို at 20:530comments
တစ်ချိန်ကြလို့ ငါ့မှာသားသမီးလေးတွေ ရှိလာခဲ့ရင်..
တစ်ချိန်ကြလို့ ငါ့မှာသားသမီးလေးတွေ ရှိလာခဲ့ရင် သူတို့ အရမ်းပျော်ရွှင်စေရမယ်။ စိတ်ချမ်းသာစေရမယ်။ ငါ တို့ အဖေနဲ့အမေဟာ တစ်ခါမှ ရန်မဖြစ်ဖူးဘူးလို့ သူတို့ ဂုဏ်ယူနိုင်စေရမယ်။
သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်၊ သင်္ကြန်လို အခါကြီးရက်ကြီးတွေ၊ ပွဲတော်တွေမှာ သူတို့ အပြည့်အ၀ကို ပျော်ရွှင်စေရမယ်။ လူငယ်ပီပီ ဘာအပူအပင်မှမရှိဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စေရမယ်။ စိတ်ဆင်းရဲနေတာ၊ တွေဝေငေးငိုင်နေတာ လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး။
သူတို့ဟာ မိဘနှစ်ပါးစလုံးရဲ့ မေတ္တာကို အပြည့်အ၀ရရှိကြလို့ အချိန်တိုင်း ပျော်ရွှင်တက်ကြွ လန်းဆန်းနေစေရမယ်။
စာသင်ခန်းထဲမှာ၊ လမ်းမပေါ်မှာ၊ ပွဲဈေးတန်းထဲမှာ၊ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ၊ အစားအသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ သိမ်ငယ်နေတာမျိုး၊ အားငယ်နေတာမျိုး၊ ၀မ်းနည်းနေတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး။ မဖြစ်စေရဘူး။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆိုတဲ့ဘ၀၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူဆိုတဲ့အရသာကို သူတို့ အပြည့်အ၀ ခံစားစေရမယ်။
ရိုက်နှက်ဆုံးမနေရတဲ့ ဖခင်မျိုး မဖြစ်ချင်ဘူး။
ငါ့ရဲ့ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ၊ ပူပင်သောကတွေကို သားသမီးတွေအပေါ် လုံးဝမကူးစက်စေချင်ဘူး။
သားသမီးတွေက ငါ့ကို စကားလာပြောကြရင်လည်း အသေအချာနားစိုက်လို့ နားထောင်ပေးချင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ၊ တွေးကြံဖန်တီးမှုတွေကို ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတရား၊ အတွေ့အကြုံ၊ စာနာနားလည်မှုတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်အားပေးချင်တယ်။
သားသမီးတွေနဲ့ တသီးတခြားကင်းလွတ်နေရတဲ့ ဖခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀မျိုးကို ဘယ်တော့မှ မရောက်ချင်ပါဘူး။
အေးအတူ ပူအမျှ ပေါင်းစည်းလို့၊ ဒိုးတူဘောင်ဖက် လုပ်ကိုင်လို့၊ အတူတကွ မျှဝေခံစားလို့ နေပျော်တဲ့ဘ၀လေးတွေကို ကိုယ်စီတည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်စိတ်ကူးနေမိတယ်ဗျာ။
တစ်ချိန်ကြလို့ ကျွန်တော့်မှာ သားသမီးလေးတွေ ရှိလာခဲ့ရင်ပေါ့ ..
Posted by ညိမ်းညို at 00:186comments
ရွာပြန်စဉ် ကြော်ငြာဆိုက်ကားတစ်စီးနဲ့ အရင်ရောက်နေတဲ့ စူပါမင်းသမီးလေး ဖတ်ဖို့
Posted by ညိမ်းညို at 10:290comments
Posted by ညိမ်းညို at 20:410comments
တောကြီးမျက်မည်းထဲ လူ့အန္ဓလေးတစ်ကောင် ရေသောက်ဆင်းလာတယ်။
လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ ငါ့အဖေရဲ့ ဦးနှောက်က ငါတို့မိသားစုကို မ,ရွေ့လိုက်တယ်။
"ရွှေကျောင်းပြောင်ပြောင် ၀မ်းခေါင်ခေါင်" မြို့ကလေးမှာ ငါတို့ ခိုနားကြတယ်။
လမ်းလျှောက်တတ်တဲ့ ငါ့အဖေရဲ့ ခြေထောက်ကြီးကျိုးသွားတယ်။
ငါရယ်၊ ငါ့အစ်ကိုရယ် အော်ခေါ်တာကို အဖေက ပြန်မထူးနိုင်တော့ဘူး။
ခတ်ကွင်းပြင်နေရတဲ့ ငါ့အမေက ငါတို့နဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ရှိုက်သံမကြားအောင် ငိုတယ်။
အမေ့သားအိမ်ထဲကနေ လောကသားအိမ်ထဲ ခုန်ဆင်းကာစ ငါ့နှမလေးက ဘုမသိဘမသိ ငိုတယ်။
သားသမီးသုံးယောက်ရှိတဲ့ငါ့အမေက လေ့ကျင့်ကွင်းအသစ်မှာ ၀တ်စုံပြည့်နဲ့ ပြေးလွှားတယ်။
ငါတို့ သားသမီးသုံးယောက်ကလည်း အမေနဲ့ တသားထဲရှိခဲ့ကြတယ်။
ချယ်ရီတောမှာ သုံးနှစ်တာ ငါပျော်မောခဲ့တယ်။
တောကြီးမျက်မည်းထဲ လူ့အန္ဓလေးတစ်ကောင် ရေသောက်နေတုန်းကွယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 00:402comments
တဟဲ..ဟဲ ပျော်မွေ့ အရသာတွေ့ကြ
ဆွေ့ဆွေ့ပဲခုန် မယုံမရှိနဲ့ သူငယ်ချင်း
ငါတော့ မျက်စိနောက်တယ် သူငယ်ချင်း ။
- တက္ကသိုလ်မင်းမော်၏ သူငယ်ချင်းကဗျာစုများကို ဖတ်ရှုပြီးနောက် ကြုံတွေ့ရတာလေးတွေကို ကဗျာရေးမိတာပါ။
Posted by ညိမ်းညို at 18:06 1 comments
ရင်ထဲမှာ မီးတောင်တွေ အကြိမ်ကြိမ်ပေါက်ထွက်ခဲ့တာတောင်
ယောင်လို့မှ မင်းနာမည်ကို မတမ်းတခဲ့ပါဘူး ။
အပူသက်သာအောင်လို့ " တဲ့လေ ။
ပြောရက်ပြောထွက်ခဲ့တဲ့ မင်းရဲ့ စကားတွေ
ဖြတ်လမ်းကို လှမ်းကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါသလား ချစ်သူ ..။
အဲဒီလောက် ချွတ်ခြုံမကျသေးတာ ခက်တယ်ကွယ်
ခေါင်းထောင်ထလာတဲ့ အဲဒီအတွေး အဲဒီဆန္ဒတွေ
ကိုယ့်စိတ်ကိုလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေးထားတတ်ပါပြီ ။
စက်ဆုပ်စရာ ယပ်တောင်အစုပ်ပလုတ်တွေ မဟုတ်ဘူးကွဲ့ ..။
တတ်နိုင်လို့ ယပ်တောင်ပုံကြီးနဲ့ပဲ ဖို့ဖို့
သစ္စာတေးတစ်ပုဒ်နဲ့ ကိုယ်အယူခံမ၀င်တော့ပါဘူး ။
ပိုးစိုးပက်စက် ကျဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ ။
ယပ်တောင်နှစ်ချောင်းနဲ့ ဘ၀ဆိုတဲ့ ခရီးကြမ်းမှာ
သွားလမ်းသာ၍ လာလမ်းဖြောင့်ပါစေသား.. ။
Posted by ညိမ်းညို at 13:430comments
မြူနှင်းတွေ အုံ့ပျဝေမှိုင်းနေတဲ့ ညချမ်းမျိုးဆို
သူ့ရင်ခွင်နဲ့ အနွေးဓာတ် မလုံလောက်တဲ့အခါ
၀မ်းပန်းတနည်း ရှိုက်,ရှိုက် ငိုနေမှာပေါ့။
အိမ်ကလေးရဲ့ ရင်ဘတ်ကို တူးဆွကြည့်ရင်
ခုထိလောင်ကျွမ်းနေတာ တွေ့ ရမှာပေါ့။
စိတ်ကို နယ်ချဲ့ ရင်း
တသွဲ့ သွဲ့ လွမ်းမိပါရဲ့ ..ကွယ်။
မျှော်လင့်ချက်တွေ မသဂြိူင်္ဟလိုက်ပါနဲ့ ဦးနော်
ငါတို့ရဲ့ နေ၀င်ချိန်တွေ မစောပါစေနဲ့ ..လို့ ။
Posted by ညိမ်းညို at 23:422comments
ဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါ ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစားလဲပြီး
မြို့ ကြီးတစ်မြို့ ထဲက လူတစ်ယောက်ရဲ့
မှုန်ဝါး သေးငယ်၊ ပျောက်ကွယ်သွားတော့မှာလား။
ဒီလိုပဲ ပြောဆိုလှုပ်ရှား ပြုမူနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်
လူတွေဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီလိုပဲ သမ်းဝေ
ဒီလိုပဲ ပျော်ရာပျော်ကြောင်း ရှာကြံနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်
မြေကြီးပေါ်မှာ "အသက်" ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်း
ဖြစ်ပြီး ပျက်တတ်တဲ့ တရားသဘောကို
Posted by ညိမ်းညို at 20:060comments
မင်းရဲကျော်စွာကို အားကျခဲ့ ငါ
မိုဟန်ဒပ်စ် ဂန္ဒီကို အားကျခဲ့ ငါ
ချာပတီရောင်းတဲ့ ကုလားမကြီးလောက် အရုပ်ဆိုး
ဇန်န၀ါရီကို ငါ မခိုးဘဲ
သူခိုးက ငါ့ကို သူခိုးလို့ စွပ်စွဲတယ်
သံလို သိပ်သည်းတဲ့ နှင်းထုကို ထိုးခွဲပြီး
Posted by ညိမ်းညို at 19:420comments
(ငှက်ဆိုတာကတော့ ...) ပျံရင်းသေ။
တိတ်ဆိတ်ချောက်ချား ကျွန်တော့်အော်သံတွေရဲ့ အဆုံးမှာ
အလွမ်းသူခိုးလေးတွေကို လိုက်ချောင်းနေတတ်တဲ့လေညင်းက လှောင်ပြုံးပြုံးတယ်
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ သတိရခြင်းနဲ့လည်ပတ်နေတဲ့ ပုံရိပ်ဖော်စက်လေးရှိတယ်
၂၄နာရီကာလပတ်လုံး အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ မမရဲ့ ပုံရိပ်လွှာလေးကို သူကထုတ်လုပ်ပေးတယ်
အနေဝေးနေရပေမဲ့ မမနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အကြား
ယုံကြည်မှုတံတားတစ်စင်း နွေးထွေးခိုင်မြဲစွာ ဖြစ်တည်နေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း
ဟောဒီ..နှလုံးသားအုံးမောင်းတစ်လျှောက် ဒီကောင်လေး အဆက်မပြတ်ခေါက်နေပါတယ်
မမခူးဆွတ်လိုက်တဲ့ ပန်းတစ်ပွင့်ဟာ ကျွန်တော့်နှလုံးသည်းညှာက ဖြစ်တယ်
ကျွန်တော်လေ..ကမ္ဘာတစ်ခြမ်းက ချစ်သူကို လွမ်းနေမိတာ။
Posted by ညိမ်းညို at 18:31 1 comments
Without honesty there is no real growth.
ရိုးသားမှုမရှိရင် စစ်မှန်တဲ့ ကြီးပွားမှု၊ တိုးတက်မှု မရှိဘူး။
Without honesty there is no freedom.
Without honesty there is no is hope.
ရိုးသားမှုမရှိရင် ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိဘူး။
Without honesty nothing is real.
ရိုးသားမှုမရှိရင် ဘယ်ဟာမှ အစစ်အမှန်မဟုတ်ဘူး။
ခွေးဟာ ရိုက်နှက်နေတဲ့လက်ကို လျှက်နေတာလေ"
"သမုတိနယ်က သစ္စာတရားကို မတွေ့ရသေးသမျှ
ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်ခေါ်ပြီး ထွက်လာချင်တယ်"
-နံနက်စောစော ရယ်မောခြင်းကဗျာ မှ/
Posted by ညိမ်းညို at 00:200comments
အနာတရတွေ မရှိဖို့တော့ လိုတယ်"
-သစ်ရွက်တို့၏ ပေါ့ဆခြင်းများ ကဗျာရှည်မှ/
Posted by ညိမ်းညို at 00:120comments
(အချစ်ကို ယုံမှတ်ကြ ထို..အရွယ်)
(လခကို အကုန်အပ်ရ အို..မလွယ်)
စိတ်လက်ပေါ့ပါးစေဖို့ ရယ်စရာကဗျာလေးနှစ်ပုဒ်ကို တင်လိုက်ပါတယ်။ လတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်း၊ ရယ်စရာကဗျာကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြပီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ကြပါစေခင်ဗျာ။
Posted by ညိမ်းညို at 18:560comments
Sowathought, and you reap on act;
Posted by ညိမ်းညို at 18:260comments
No word, no music
but beats in the heart..
No spark, no flame
butalight in the head.
It's Love and Truth!
Pure and clear, ...are they
ever singing and shining.
A light humble and happy.
ရင်ထဲမှာ သံနရီ မြည်နေပါသတဲ့
သန့်သန့်ကလေး - ရှင်းရှင်းကလေး
ဪ..ဤဘ၀ ရိုးစွ၊ သာစွ၊ အနေလှ။
Posted by ညိမ်းညို at 18:110comments
Poetry is "aspeaking picture - with this end, to teach and delight."
ကဗျာဆိုတာ စကားပြောတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ပါပဲ။ ဖတ်သူကို သင်ပြတယ်။ နှစ်သက်စေတယ်။
Poetry is " the spontaneous overflow of powerful feeling recollected in tranquility."
ကဗျာဆိုတာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်လည်တွေးတောပြီး ပြင်းပြတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာ တသွင်သွင် ယိုစီးခြင်းပါပဲ။
Poetry is "acriticism of life."
ကဗျာဆိုတာ ဘ၀ကို ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။
Poetry is " the intellect colored by feeling."
ကဗျာဆိုတာ ခံစားမှုများနဲ့အရောင်တင်ထားတဲ့ အသိဥာဏ်ပါပဲ။
The offic of poetry is not to make us think accurately, but feel truly.
ကဗျာရဲ့ အလုပ်တာဝန်က ကျုပ်တို့ကို အတိအကျစဉ်းစားတတ်အောင်လုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန် ခံစားတတ်အောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ပါပဲ။
Posted by ညိမ်းညို at 02:172comments
"ကျွန်မ ဘယ်လမ်းကို သွားရမလဲရှင်"
"မင်းက ဘယ်ကို သွားချင်တာလဲကွဲ့ .."
"ဒါဖြင့်လည်း သွားချင်တဲ့လမ်းသာ သွားပေါ့ကွယ်"
- ထူးဆန်းသောတိုင်းပြည်မှ အဲလစ်၏ စွန့်စားခန်းများ ဆိုတဲ့ ပုံပြင်လေးထဲက
အဲလစ်နဲ့ ကြောင်ကြီးရဲ့ အပြန်အလှန်စကားပြောခန်းမှ/
Posted by ညိမ်းညို at 22:272comments
Bird of love!
Fly in! fly in!
Bird of Anger!
Fly for away
Posted by ညိမ်းညို at 20:550comments
Posted by ညိမ်းညို at 20:460comments
ပြောမထွက်ဘူးဆိုပြီး တစ်ခါတစ်ခါ မြိုသိပ်တယ်
မပြောရက်ဘူးဆိုပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ငဲ့ညှာတယ်
မပြောတတ်ဘူးဆိုပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ခေါင်းရှောင်တယ်
မပြောရဲဘူးဆိုပြီး အခါခါ ခေါင်းငုံ့ရတိုင်း
ငါ့အသံမှာ သစ္စာတရားဟာ တတိတိယိုယွင်းတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 03:042comments
ကျွန်တော့်ရင်အုံကို တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ တည့်တည့်ပစ်ပေါက်လိုက်တယ်
အမြဲတစေ သတိရခြင်းနဲ့ နေထိုင်စားသောက်တယ်
အမြဲတစေ သတိရခြင်းနဲ့ သွားတယ်၊ လာတယ်၊ လှုပ်ရှားတယ်
အဲဒီလို အမြဲတစေ သတိရခြင်းနဲ့ယဉ်ပါးနေရတာကို ကျေနပ်တယ်
နှလုံးသားရဲ့ ဥပဒေကို သူ့အလိုလို ပြဌာန်းပစ်လိုက်တယ်
သူ့နာမည်လေးကို ဦးဦးဖျားဖျား ရေးထိုးထားချင်တယ်
တိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်လာတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ မိုးတွေစွေခဲ့တယ်
အချစ်နဲ့ ဖျန်းပက်ခြင်းခံရတဲ့အခါ ကျွန်တော် နှစ်ခြိုက်စွာဖျားနာတတ်ခဲ့ပြီ။
Posted by ညိမ်းညို at 02:51 1 comments
ရွာပြန်စဉ် ကြော်ငြာဆိုက်ကားတစ်စီးနဲ့ အရင်ရောက်နေတဲ...